Meydka Majaajiliiste Ilkacase oo maanta aasay & natiijada baaritaanka oo aan la shaacin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay meydka Cabdi Maxamed Ilka-case oo jimcihii si kedis ah ugu geeriyooday Muqdisho.
Waxaa aaska Marxuum Ilka-case ka qeybgalay wasiirka wrfaafinta Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow, xildhibaan Prof. Cusmaan Maxamuud Dufle, xubno kale oo kala ka tirsan labada gole ee dowladda, mas’uuliyiin ka socotay Maamulka Gobolka Benaadir, Faniin, Abwaanno, ehelada marxuumka iyo dad weyne kale oo aad u fara badan.
Xildhibaan Cabdi Xaashi ayaa sheegay in marxuumka uu ahaa dhalinyaradii fanka ka soo galay dhanka degmooyinka, islamarkaana wax badan bulshada u qabtay oo ku saabsan dhanka jilinka iyo majaajilada.
Xildhibaan Cismaan Maxamuud Dufle oo ah Guddoomiyaha guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka oo isna aaska ka hadlay ayaa tacsi u diray dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo ehelada uu ka geeriyooday majaajiliiste Cabdi Maxamed Maxamuud Ilka case.
Wasiirka Warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa ugu horeyn bahda fanaaniinta iyo shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyay geerida ku timid Marxuum Cabdi Maxamed Maxamuud “Ilka case”, waxaana uu intaa ku daray in agoonta uu ka tegay ay Wasaaraddu ilgaar ah ku eegi doonto, iyadoo la kaashaneysa Fanaaniinta Hobollada Qaranka ee Waaberi.
“Waxaan tacsida la qeyb saneynaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriday marxuumka, waxaana Alle uga baryeynaa in uu Janada ka waraabiyo, ehelada iyo asaxaabta uu ka tegeyna samir iyo iimaan eebe haka siiyo” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Dowladda ayaa horay u sheegtay in baaritaan lagu sameynayo sababtii uu u dhintay Ilkacase, hase ahaatee maanta goobta aaska lagama sheegin sababta geerida kediska ah ee ku timdi.
Alshabaab oo sheegtay iney gacanta ku dhigeen doon sahaay u siday Baraawe